News | Tag: gold
सुनको भाउ तोलाको ८२ हजार ५ सय
काठमाडौँ । आज छापावाल सुन तोलाको ८२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएअनुसार आज तेजावी सुन तोलाको ८२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
एजेन्सी । भारतको हरियाणास्थित सिरसामा यस्तो घटना घटेको छ जुन सुन्दा अचम्म लाग्छ । एक साँढेले महिलाको ४ तोला सुनको गहना खाएको छ ।
सुन लगाउनुको शुभ–अशुभ प्रभाव जान्नुहोस्
काठमाडौँ । पछिल्लो समय लगातार उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९०० ले घटेको छ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार पनि प्रतितोला रु एक हजारले सुनको मूल्य घटेको थियो ।
सुनको मुल्यले बनाएको नयाँ रेकर्ड
काठमाडौँ । अमेरिका र इरानको तनावले विश्वभर सुनको मुल्यलाई असर गरेको छ । नेपालमा पनि यसको असर देखिएको छ । नेपालमा सुनको मुल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुनको मूल्यले यसअघि बनाएका सबै रेकर्ड तोड्दै तोलामै तीन दिनमा २ हजारले बढेर ७५ हजार ५ सय पुगेको छ।
काठमाडौँ । प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आठ किलोग्राम सुनसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सुनको भाउ तोलाको ७१ हजार २ सय
काठमाडौँ । आज छापावाल सुन तोलाको ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सुनलाई कसरी राख्दा शुभ मानिन्छ ?
विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुनको सिक्का
विश्वकै सबैभन्दा पातलो सुन !
एजेन्सी । बेलायतको यूनिभर्सिटी अफ लीड्सका अनुसन्धानकर्ताले विश्वकै सबैभन्दा पातलो सुन तयार गरेका छन् । यो सुन सामान्य सुनभन्दा १० गुणा बढि उपयोगी हुन्छ ।